Ny Fiainantsika sy ny Fanompoana VJ: Fandaharana 2-8 Aprily 2018
Hira 19 sy Vavaka
“Inona no Itovizan’ny Paska sy ny Fahatsiarovana ary Inona no Maha Samy Hafa Azy?”: (10 min.)
Mt 26:17-20: Nihinana ny Paska farany niaraka tamin’ny apostoliny i Jesosy (“Ny Sakafon’ny Paska” fanazavana sy sary Mt 26:18, nwtsty: *)
Mt 26:26: Mifanitsy amin’ny vatan’i Jesosy ny mofon’ny Fahatsiarovana (“no” fanazavana Mt 26:26, nwtsty)
Mt 26:27, 28: Mifanitsy amin’ny ran’i Jesosy na ny “ran’ny fifanekena” ny divain’ny Fahatsiarovana (“ran’ny fifanekena” fanazavana Mt 26:28, nwtsty)
Mt 26:17: Nahoana ny 13 Nisana no azo antsoina hoe “andro voalohan’ny fetin’ny mofo tsy misy lalivay”? (“Tamin’ny andro voalohan’ny fetin’ny mofo tsy misy lalivay” fanazavana Mt 26:17, nwtsty)
Mt 26:39: Inona no mety ho nahatonga an’i Jesosy hivavaka hoe: “Esory amiko ity kaopy ity”? (“esory ... ity kaopy ity” fanazavana Mt 26:39, nwtsty)
Famakiana Baiboly: (4 min. na latsaka) Mt 26:1-19
Fampianarana Baiboly: (6 min. na latsaka) bhs 59 § 21-22 sy fanamarihana
Ataovy Namanao i Jehovah: Ny Vidim-panavotana: (7 min.) Alefaso ilay video. Mifidiana ankizy vitsivitsy mialoha ary asaivo mankeny amin’ny lampihazo. Fanontaniana: Nahoana isika no marary sy mihantitra ary maty? Inona no nomen’i Jehovah mba hanavotana antsika? Iza no tianao ho hita rehefa any amin’ny Paradisa?
Fianarana Baiboly: (30 min.) jy toko 15
Hira 74 sy Vavaka
^ feh. 7 Mbola tsy misy amin’ny teny malagasy io Baiboly fianarana io. Ao amin’ny Loharanon-kevitra ao Amin’ny Tari-dalana (mwbr) ireo fanazavana ireo (midira ao amin’ny jw.org/mg, ary tsindrio ny ZAVATRA MISY > TARI-DALANA HO AN’NY FIVORIANA).
Ny Fiainantsika Kristianina sy ny Fanompoana: Fandaharana ho An’ny 2-8 Aprily 2018